Nzuzo - iSearch
1. Nzuzo na ile anya
Ònye na-ahụ maka nchịkọta data na ebe nrụọrụ weebụ a?
Usoro nhazi data a na ebe nrụọrụ weebụ a na-arụ site n'aka onye ọrụ weebụ. A ga-ahụ nkọwa kọntaktị ya na akara nke ebe nrụọrụ weebụ a.
A ga-anakọta data gị n'otu aka, ka ị gwa anyị. Dịka ọmụmaatụ, nke a nwere ike ịbụ data ịbanye na ụdị kọntaktị.
A na-anakọta data ndị ọzọ na-akpaghị aka mgbe ị na-eleta weebụsaịtị site na usoro IT anyị. Ndị a dị elu karịa data ntanetị niile (wdg. Ihe nchọgharị Ịntanetị, sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ oge nke arịrịọ rịọ). Nchịkọta nke data a bụ akpaka ozugbo ị abanye na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Kedu ihe anyị ji data gị mee?
A na-anakọta akụkụ nke data iji hụ na e nwere ndokwa na-enweghị ntụpọ nke weebụsaịtị. Enwere ike iji data ndị ọzọ nyochaa àgwà onye ọrụ gị.
Kedu ikike ị nwere gbasara data gị?
N'oge ọ bụla ị nwere ikike ịnweta ozi n'efu gbasara mmalite, onye nnata na ebumnuche nke data onwe gị echekwara. I nwekwara ikike ị rịọ mgbazi, igbochi ma ọ bụ nhichapụ data a. Maka nzube a na maka ajụjụ ndị ọzọ banyere nchedo data, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla na adreesị e nyere na akara ahụ. Ọzọkwa, ị nwere ikike ịrịọ ndị nlekọta nchịkwa ruru eru.
Mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ anyị, a na-enyocha nyocha ị na-egwu egwu. Nke a na-emekarị na kuki na ihe a na-akpọ mmemme nyocha. Nyocha nke omume ị na-asọfụ bụ nke a na-amaghị aha; enweghi ike ichigharia gi n'omume ikuku. Ị nwere ike ịjụ nyocha a ma ọ bụ gbochie ya site na iji ụfọdụ ngwaọrụ. Enwere ike ịchọta ozi zuru ezu na iwu nzuzo nzuzo.
Ị nwere ike ịjụ nyocha a. Anyị ga-agwa gị banyere ohere nke ịjụ na iwu nzuzo a.
2. Ozi zuru oke na ozi amanyere
Ndị ọrụ nke ibe ndị a na-echedo data nkeonwe gị nke ọma. Anyị na-emeso data nkeonwe gị nke ọma na dịka iwu iwu nchedo iwu na iwu nzuzo a.
Ọ bụrụ na ị jiri weebụsaịtị a, a ga-anakọta data dịgasị iche iche. Ozi nkeonwe bụ ozi na-akọwapụta gị n'onwe gị. Nzuzo Nzuzo a na-akọwa ihe ọmụma anyị na-anakọta na ihe anyị jiri ya maka. Ọ na-akọwakwa etu na ebumnuche nke a mere.
Anyị na-ekwu na ntinye data na Ịntanetị (dịka na nkwurịta okwu site na E-Mail) nwere ike igosi ọdịiche nche. Nchebe zuru oke nke data site na ịnweta site n'aka ndị ọzọ agaghị ekwe omume.
Rịba ama ahụ dị mkpa
Usoro nhazi data nke dị na weebụsaịtị a bụ:
Gaa 22 na Haunert
onye nduzi na-anọchite anya ya
Ekwentị: 02924 879560
Onye na-arụ ọrụ bụ onye nkịtị ma ọ bụ onye iwu, onye naanị ya na ndị ọzọ, kpebiri na ebumnuche na usoro nhazi data nkeonwe (dịka aha, adreesị ozi-e, wdg).
Ọtụtụ arụmọrụ data na-ekwe omume na nkwenye gị kwupụtara. Ị nwere ike iwepu nkwenye dị ugbu a n'oge ọ bụla. Ozi na-ezighị ezi site na e-mail na anyị zuru ezu. Iwu iwu nke nhazi data weere ruo nkwụsị ahụ ka mkpochapughị.
Ikwesịrị ịrịọ onye nlekọta nlekọta ruru eru
N'ihe gbasara imebi iwu iwu nchekwa data, onye nwere nsogbu nwere ikike ịrịọ onye nlekọta nchịkwa ruru eru. Onye nlekọta na-ahụ maka nchedo data bụ onye nlekọta nche data nke obodo gọọmenti etiti nke ụlọ ọrụ anyị dabeere. A nwere ike ịchọta ndepụta nke ndị nche nchekwa data na nkọwa kọntaktị ha na njikọ ndị a: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Right to data transtability
Ị nwere ikikere ịnweta data anyị ji eme ihe na nkwenye gị ma ọ bụ na mmezu nke nkwekọrịta, n'onwe ya ma ọ bụ ndị ọzọ na ọkọlọtọ, usoro nhazi nke igwe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe data na onye ọzọ na-elekọta, a ga-eme nke a ruo n'ókè ọ ga-eme.
Ntuchi SSL ma ọ bụ TLS
Ụlọ ọrụ a na-eji, maka ihe nchedo ma chebe nnyefe nke ọdịnaya nzuzo, dị ka iwu maọbụ rịọ ka ị zigara anyị dịka onye na-ahụ maka saịtị, SSL ma ọ bụ. TLS izo ya ezo. Ị nwere ike ịchọpụta njikọ ezoro ezo site na ịgbanwe akara adreesị nke ihe nchọgharị ahụ site na "http: //" gaa na "https: //" na akara mkpọchi na akara nyocha gị.
Ego ezoro ezo na weebụsaịtị a
Ọ bụrụ na, mgbe ngwụsị nke nkwekọrịta nkwekọrịta ego, ọrụ dịịrị iji zitere anyị nkwụnye ego gị (dịka nọmba ndekọ maka ego nkwụnye ego), a ga-achọ data a maka nhazi ịkwụ ụgwọ.
Ịkwụ ụgwọ azụmahịa site na ụzọ nkwụnye ụgwọ (Visa / MasterCard, nhazi ego) bụ naanị site na SSL ma ọ bụ TLS ezoro ezo. Ị nwere ike ịchọpụta njikọ ezoro ezo site na ịgbanwe akara adreesị nke ihe nchọgharị ahụ site na "http: //" gaa na "https: //" na akara mkpọchi na akara nyocha gị.
N'ihe banyere ozi ezoro ezo, nkọwa nkwụnye ụgwọ gị nke ị nyefere n'aka anyị enweghị ike ịgụ ndị ọzọ.
Ị nwere ikikere ịhapụ ozi gbasara data onwe gị echekwara, mmalite ha na onye nnata na nzube nke nhazi data, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ikike iji dozie, igbochi ma ọ bụ nhichapụ data a. Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere data onwe onye ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla na adreesị e nyere na akara ahụ.
Nkwekọrịta megide emelite mgbasa ozi
Ejila nke e bipụtara na gburugburu ihe mgbaàmà ọrụ kọntaktị maka izipu ozi mgbasa ozi na ihe ọmụma abụghị nke a jụrụ. Ndị ọrụ nke ibe ahụ kwadoro ikike ịme ihe omume iwu na ihe omume nke ezipụghị ozi mgbasa ozi, dị ka ozi-e spam.
Onye na-elekọta iwu nchedo iwu
Anyị ahọpụtala onye nlekọta nche data maka ụlọ ọrụ anyị.
4. Nchịkọta data na weebụsaịtị anyị
The weebụsaịtị ka ojiji nke a na-akpọ kuki. Kuki na kọmputa gị ọ dịghị nsogbu na adịghị nwere nje. Kuki na-eji mee ka anyị na-ejere ndị ọzọ ọrụ na onye-enyi na enyi, irè ma odi mfe. Kuki ndị bụ obere faịlụ ederede na-echekwara na kọmputa gị na-echekwara site na ihe nchọgharị gị.
Imirikiti kuki anyị na-eji bụ ndị a na-akpọ "kuki oge". A ga-ehichapụ ha na njedebe na njedebe nke nleta gị. A na-echekwa kuki ndị ọzọ na ngwaọrụ gị ruo mgbe ihichapụ ha. Kuki ndị a na-enye anyị ohere ịmata nchọgharị gị oge ọzọ ị gara.
Ị nwere ike ịtọ ihe nchọgharị gị ka ị kọọrọ gị banyere nkwụsị kuki na ikwe ka kuki naanị na ọnọdụ ọ bụla, ịnakwere kuki maka ụfọdụ ma ọ bụ n'ozuzu wepu ma mee ka kuki nhichapụ akpaka mgbe ị mechiri ihe nchọgharị ahụ. Ịkwụsị kuki nwere ike ịkwụsị ọrụ nke weebụsaịtị a.
Kuki ndị achọrọ iji mepụta usoro nkwurịta okwu kọmputa ma ọ bụ iji nye ọrụ ụfọdụ ịchọrọ iji (dịka ụlọ ọrụ ịzụ ahịa) na-ebipụta dabeere na Art. 6 para 1 lit. f DSGVO echekwara. Onye ọrụ weebụ ahụ nwere mmasị dị mma maka nchekwa nke kuki maka arụmọrụ na-enweghị ntanetị na mmezi kachasị nke ọrụ ya. Ọ bụrụ na echekwara kuki ndị ọzọ (dịka kuki maka nyochaa omume gị na sọọfụ), a ga-emeso ha n'otu n'otu na iwu nzuzo a.
Server log faịlụ
Onye na-enye peeji nke na-akpaghị aka na-anakọta ma na-echekwa ozi n'ime faịlụ ndekọ ihe nkesa, nke ihe nchọgharị gị na-ebute anyị na-akpaghị aka. Ndị a bụ:
Ụdị nchọgharị na ụdị ihe nchọgharị
Nọrọ n'ụlọ aha nke ịnweta kọmputa
Time of server arịrịọ
A gaghị ejikọta ya na data ndị ọzọ data.
Ihe ndabere maka nhazi data bụ Art. 6 para 1 lit. b DSGVO, nke na-enye ohere nhazi data iji mezuo nkwekọrịta ma ọ bụ nkwekọrịta nkwekọrịta.
Ọ bụrụ na iziga anyị ajụjụ site na ụdị kọntaktị ahụ, a ga-echekwa nkọwa gị site na mpempe akwụkwọ, gụnyere nkọwa kọntaktị ị nyere n'ebe ahụ, ka ị nwee ike ịhazi arịrịọ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-ajụ ajụjụ. Anyị agaghị ekerịta ozi a n'enweghị nkwenye gị.
Nhazi nke data wee banye n'ụdị kọntaktị bụ naanị dabere na nkwenye gị (Art 6 para. 1 lit. a DSGVO). Ị nwere ike iwepu nkwenye a n'oge ọ bụla. Ozi na-ezighị ezi site na e-mail na anyị zuru ezu. Iwu iwu nke arụmọrụ data na-arụ ruo mgbe mkpochapu ka na-enweghị ntụpọ site nkwụsị.
Data nke ịbanye na kọntaktị ahụ na-anọnyere anyị ruo mgbe ị rịọrọ anyị maka nhichapụ, wepụ nkwenye gị na nchekwa ma ọ bụ nzube nke echekwara data nchekwa (dịka mgbe ịchisịrị arịrịọ gị). Ntuziaka iwu akwadoro - karịsịa oge nkwụsịtụ - nọgidere na-enweghị ntụpọ.
Ndebanye aha na weebụsaịtị a
Ị nwere ike ịdebanye aha na weebụsaịtị anyị iji jiri atụmatụ ndị ọzọ na saịtị ahụ. Anyị na-eji data abanye maka nzube nke iji onyinye ma ọ bụ ọrụ nke ị debara aha. A ghaghị inye nkọwa zuru ezu nke a rịọrọ n'oge ndebanye aha. Ma ọ bụghị ya, anyị ga-ajụ ndebanye aha.
Maka mgbanwe ndị dị mkpa, dị ka nnukwu nnyefe ma ọ bụ maka mgbanwe ntanetị, anyị na-eji adreesị ozi-e akọwapụtara n'oge ndebanye aha iji gwa gị n'ụzọ dị otú a.
Nhazi nke data banyere n'oge ndebanye aha na-adabere na nkwenye gị (Art 6 para. 1 lit. a DSGVO). Ị nwere ike iwepu nkwenye gị n'oge ọ bụla. Ozi na-ezighị ezi site na e-mail na anyị zuru ezu. Iwu iwu nke nhazi usoro data nke edecharala na-anọgide na-enweghị mmetụta site nwepụ.
A ga-echekwa data anakọtara n'oge ndebanye aha ma ọ bụrụhaala na ị debara aha na ebe nrụọrụ weebụ anyị ma ga-ehichapụ. Oge nchechi iwu na-adighi emetụta ya.
Ndebanye aha na Facebook Jikọọ
Kama ịdenye aha na ebe nrụọrụ weebụ anyị, ị nwere ike ịdebanye aha na Facebook Jikọọ. Onye nyere ọrụ a bụ Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịdebanye aha na Facebook Jikọọ ma pịa "Nbanye na Facebook" / "Jikọọ na Facebook" bọtịnụ, a ga-echegharị gị na ntinye Facebook. N'ebe ahụ ị nwere ike ịbanye na data ejiri gị. Nke a jikọtara Facebook profaịlụ anyị na weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ anyị. Njikọ a na-enye anyị ohere ịnweta data gị echekwara na Facebook. Ndị a dị n'elu:
Profaili Facebook ma kpuchie foto
Adreesị ozi-e Facebook
Facebook enyi anatara
Facebook mmasị (mmasị)
A na-eji data ndị a mee ihe, ndokwa ma hazie akaụntụ gị.
Maka ama ndi ozo, lee Ntughari Facebook na Facebook. Enwere ike ịchọta ha na: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ na https://www.facebook.com/legal/terms/.
Nkwupụta na ebe nrụọrụ weebụ a
Na mgbakwunye na okwu gị, ọrụ ikwu okwu na ibe a ga-enwekwa ozi gbasara mgbe e kere okwu ahụ, adreesị ozi-e gị na, ọ bụrụ na i tinyeghị aha, aha njirimara ị họtara.
Nchekwa adreesị IP
Ọrụ anyị na-echekwa adreesị IP nke ndị ọrụ na-ede ihe. Ebe ọ bụ na anyị anaghị elele ihe na saịtị anyị tupu arụ ọrụ, anyị chọrọ ozi a ka anyị nwee ike imegide onye edemede ma ọ bụrụ na ọ bụ mmejọ dị ka mkparị ma ọ bụ okwu nduhie.
Idenye aha comments
Dịka onye ọrụ nke ibe ị nwere ike ịdenye aha mgbe ị debanyere aha. Ị ga-enweta ozi nkwenye iji chọpụta na ị bụ onye nwe adreesị email ahụ. Ị nwere ike wepu aha gị na ọrụ ọ bụla n'oge ọ bụla site na njikọ na ozi ịntanetị. A ga-ehichapụ data ahụ nke na-edebanye aha na-aza ajụjụ a; Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nyelarị anyị data a maka nzube ndị ọzọ na n'ebe ndị ọzọ (dịka, akwụkwọ akụkọ), ha ga-anọnyere anyị.
Oge nchekwa nke ihe
A na-echekwa ihe na data ndị metụtara (dịka adreesị IP) ma na-edebe na webụbụsaịtị anyị ruo mgbe ewepụrụ kpamkpam ọdịnaya ekwuru ma ọ bụ ekwesịrị ehichapụ ihe maka ihe gbasara iwu (dịka okwu mkparị).
A na-echekwa ihe ndị ahụ na nkwenye gị (Art 6 para. 1 lit. a DSGVO). Ị nwere ike iwepu nkwenye gị n'oge ọ bụla. Ozi na-ezighị ezi site na e-mail na anyị zuru ezu. Iwu iwu nke arụ ọrụ nhazi nke data arụkwaghịrị na-anọgide na-adịghị emetụta site nwepụ.
Nhazi data (onye ahịa na nkwekọrịta data)
Anyị na-anakọta, hazie ma jiri data onwe onye naanị dịka ha dị mkpa maka nhazi, ọdịnaya ma ọ bụ mgbanwe nke mmekọrịta iwu (data nchịkọta data). A na-eme nke a na-adabere na Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, nke na-enye ohere nhazi data iji mezuo nkwekọrịta ma ọ bụ nkwekọrịta nkwekọrịta. Anyị na-anakọta, hazie ma jiri data nkeonwe na ojiji nke weebụsaịtị anyị (data ojiji) naanị dị ka nke a dị mkpa iji mee ka ma ọ bụ kwụọ onye ọrụ maka ọrụ nke ọrụ ahụ.
A ga-ehichapụ data ndị ahịa achọtara mgbe ha gwụchara ma ọ bụ ịkwụsị mmekọrịta azụmahịa. Oge nchechi iwu na-adighi emetụta ya.
Ntinye data na njedebe nke nkwekọrịta maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ere ahịa na ihe ndị e zigara
Anyị na-ebunye onwe onye data ka ndị ọzọ naanị ma ọ bụrụ na nke a dị mkpa dị ka akụkụ nke nkwekọrịta, dị ka ndị ọchịchị na-ahụ maka nnyefe nke ngwongwo ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ na-ahụ maka nhazi ịkwụ ụgwọ. A n'ihu nyefe nke data gaghị enwekwa ma ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na i expressly kwere na nyefe. A nyefe nke gị data ka ndị ọzọ na-enweghị n'ezoghị nkwenye, dị ka ya maka mgbasa ozi na nzube, adịghị ewere ọnọdụ.
Nyefee data na njedebe nke nkwekọrịta maka ọrụ na ọdịnaya dijitalụ
Anyị na-ebufe data ndị ọzọ na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na nke a dị mkpa n'ime usoro nkwekọrịta ahụ, dịka ọmụmaatụ na ụlọ akụ na-ebu maka ịkwụ ụgwọ.
Enweghi ike ịnyefe data ahụ anaghị ewere ọnọdụ ma ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ị kwadoro nnyefe ahụ. Ịnyefe data gị na ndị ọzọ na-enweghị nkwenye doro anya, dịka maka maka mgbasa ozi, adịghị eme.
5. Mgbasa mgbasa ozi
Facebook plugins (Dị ka & Share bọtịnụ)
Na ntanetị ibe anyị nke netwọk mmekọrịta Facebook, onye na-enye Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, ejikọtala. Enwere ike iji Facebook logo ma ọ bụ "Like-Button" ("dịka") na saịtị anyị. Enwere ike ịhụ nchịkọta nke plugins Facebook ebe a: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Mgbe ị gara na ibe anyị, ngwa mgbakwunye ahụ gosipụtara njikọ dị n'etiti nchọgharị gị na sava Facebook. Facebook natara ozi nke ị gara na saịtị anyị na adreesị IP gị. Ọ bụrụ na ị pịa Facebook "Dịka-Button" mgbe ịbanye n'ime akaụntụ Facebook gị, ị nwere ike jikọta ọdịnaya nke ibe anyị na profaịlụ Facebook gị. N'ihi ya, Facebook nwere ike ịnye nleta na ibe anyị na akaụntụ onye ọrụ gị. Anyị na-ekwupụta na anyị dịka onye na-enye peeji ndị amaghị na ọdịnaya nke data na-ezigara na Facebook ha. Maka ama ndị ọzọ, hụ Nzuzo Nzuzo Facebook na: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị na Facebook nwere ike ekenye ileta anyị peeji nke ka gị Facebook akaụntụ, ị na-apụ gị Facebook akaụntụ.
A na-agụnye ọrụ Twitter anyị na ibe anyị. A na-enye atụmatụ ndị a site na Twitter Inc., 1355 Market Street, 900 Suite, San Francisco, CA 94103, USA. Site n'iji Twitter na ọrụ "Re-Tweet", weebụsaịtị ndị ị gara ga-ejikọta na akaụntụ Twitter gị ma kenye ndị ọrụ ndị ọzọ. A na-ebute data a na Twitter. Anyị na-ekwupụta na anyị dịka onye na-enye ibe weebụ amaghị banyere ọdịnaya nke data ndị a na-ebute site na Twitter. Maka ozi ndị ọzọ, hụ iwu nzuzo nke Twitter na: https://twitter.com/privacy.
Ntọala nzuzo gị na Twitter nwere ike ịchọta na Ntọala Akaụntụ n'okpuru https://twitter.com/account/settings ịgbanwe.
Akwụkwọ anyị jiri atụmatụ Google. Onye nyere ya bụ Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Na-anakọta ma kesaa ozi: Jiri bọtịnụ Google + bipụ ozi n'ụwa niile. Na Google button, ị na ndị ọrụ ndị ọzọ na-enweta ahaziri ọdịnaya site Google na anyị mmekọ. Google ga-echekwa ma na ihe ndị i nyere maka a ọdịnaya + 1, nakwa dị ka ihe ọmụma banyere ihe page ị anya na + 1 mgbe ị pịa. Gị 1 nwere ike ịpụta dịka ihe ngosi tinyere aha profaịlụ gị na foto na ọrụ Google, dị ka nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ na profaịlụ Google gị, ma ọ bụ n'ebe ọzọ na weebụsaịtị na mgbasa ozi na Ịntanetị.
Ihe ndekọ Google nke gbasara ọrụ + 1 gị iji melite ọrụ Google na gị na ndị ọzọ. Iji bọtịnụ Google +, ịchọrọ ịhụ ụwa niile, profaịlụ Google n'ihu ọha nke ga-ebu ma ọ dịkarịa ala aha ahọrọ maka profaịlụ. A ga - eji aha a mee ihe na ọrụ Google niile. N'ọnọdụ ụfọdụ, aha a nwere ike dochie aha ọzọ ị na-eji mgbe ịkekọrịta ọdịnaya site na Akaụntụ Google gị. A pụrụ igosi njirimara nke profaịlụ Google gị nye ndị ọrụ mara adreesị ozi-e gị ma ọ bụ nwee ozi ndị ọzọ na-achọpụta n'aka gị.
Jiri ozi anakọtara: Na mgbakwunye na ojiji eji edepụta n'elu, a ga-eji ozi ị nyere nyere dịka iwu iwu nzuzo Google dị. Google nwere ike bipụtara ọnụ ọgụgụ nchịkọta banyere ndị ọrụ '+ 1 ma ọ bụ nyefee ha na ndị ọrụ na ndị mmekọ, dị ka ndị nkwusa, ndị mgbasa ozi, ma ọ bụ ndị mmekọ mmekọ.
Ngwa mgbakwunye Instagram
A na-arụ ọrụ nke ọrụ Instagram na akụkụ anyị. Enyere njirimara ndị a site na Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.
Ọ bụrụ na ịbanyela na akaụntụ Instagram gị, ị nwere ike jikọta ọdịnaya nke ibe anyị na profaịlụ Instagram gị site na ịpị bọtịnụ Instagram. Nke a na-enye ohere Instagram iji jikọọ nleta na ibe anyị na akaụntụ njirimara gị. Anyị na-ekwupụta na anyị dịka onye na-enye ibe weebụ adịghị enweta ihe ọmụma nke ọdịnaya nke data transmitted na iji ha site Instagram.
Maka ama ndị ọzọ, lee Ntuziaka Ntuziaka Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.
Pinterest ngwa mgbakwunye
Na saịtị anyị, anyị na-eji ntanetị mmekọrịta sitere na netwọ mmekọrịta nke Pinterest nke Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA94103-490, USA ("Pinterest").
Mgbe ị gara na peeji nke nwere ihe mgbakwunye dị otú ahụ, ihe nchọgharị gị na-ejikọ aka na sava nke Pinterest. Ihe mgbakwunye ahụ na-ebufe protocol data na ihe nkesa nke Pinterest na USA. Ihe ndekọ data a nwere ike ịgụnye adreesị IP gị, adreesị nke weebụsaịtị ndị gara, nke gụnyere atụmatụ Pinterest, ụdị nchọgharị na ntọala, ụbọchị na oge nke arịrịọ ahụ, otu ị si eji Pinterest, na kuki.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara nzube ahụ, ịkwalite na nhazi na ntinye nke Pinterest site na Pinterest, nakwa ikike gị na nke a na ụzọ iji chebe nzuzo gị, hụ iwu nzuzo nke Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
6. Ngwa nyocha na mgbasa ozi
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji ọrụ nke nchịkọta Google Analytics web analytics. Onye nyere ya bụ Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Nchịkọta Google na-eji ihe a na-akpọ "kuki". Ndị a bụ faịlụ ederede echekwara na kọmputa gị ma kwe ka nyochaa ojiji nke weebụsaịtị gị. Ihe ọmụma nke kuki site na iji ojiji weebụsaịtị a na-ebutekarị na Google nkesa na USA ma debe ebe ahụ.
A na-echekwa kuki nchịkọta Google site na Art. 6 para 1 lit. f DSGVO. Onye ọrụ weebụ ahụ nwere mmasị ziri ezi n'ịtụle omume onye ọrụ iji wee nwee ike ịme ma ma weebụsaịtị ma mgbasa ozi ya.
Anyị arụ ọrụ ọrụ IP aha na ebe nrụọrụ weebụ a. N'ihi ya, Google ga-edepụta adreesị IP gị n'ime mba ndị ọzọ nke European Union ma ọ bụ ndị ọzọ na Agreement na European Economic Area tupu a kpọga ya na United States. Naanị n'ọnọdụ ndị ọzọ a ga-eziga adreesị IP zuru ezu na sava Google na United States ma dị mkpirikpi. Maka onye ọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ a, Google ga-eji ozi a iji nyochaa ojiji nke weebụsaịtị gị, iji chịkọta akụkọ na arụmọrụ weebụsaịtị yana inye ọrụ ndị ọzọ metụtara ọrụ weebụ na ịntanetị na onye ọrụ weebụ. Adreesị IP nke Google Analytics nyere dị ka akụkụ nke Google Analytics agaghị ejikọta na data Google ndị ọzọ.
Ị nwere ike igbochi nchekwa nke kuki site na ntọala kwekọrọ na ngwanrọ ihe nchọgharị gị; Otú ọ dị, biko mara na ọ bụrụ na i mee nke a, ị gaghị enwe ike iji atụmatụ niile nke weebụsaịtị a ruo n'ókè kachasị. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike igbochi nchịkọta Google site na kuki ahụ nke kuki wepụtara na nke metụtara gị iji weebụ (gụnyere adreesị IP gị) yana nhazi nke data a site na nbudata nkwụnye ihe nchọgharị ahụ dị n'okpuru njikọ na-esonụ ma wụnye: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Mmegide data collection
Ị nwere ike igbochi nchịkọta data gị site Google Analytics site na ịpị njikọ njikọ na-esonụ. A ga-edebe kuki ọpụpụ iji gbochie data gị ịnakọta na nleta n'ọdịnihu na saịtị a: Gbanyụọ Google Analytics.
Maka ozi ndi ozo banyere esi eme ihe nyocha nke ndi ozo na Google Analytics, biko gaa na Nzuzo Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Anyị abanyewo na nkwekọrịta nkwekọrịta nkwekọrịta nke Google na iji mejuputa ngwa ngwa nke ndị ọrụ nchedo data German na-eji Google Analytics.
Weebụsaịtị a na-eji Google AdSense, ọrụ maka ijikọ mgbasa ozi nke Google Inc. ("Google"). Ndị na-enye ya bụ Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google AdSense na - eji "kuki", faịlụ ederede echekwara na kọmputa gị ma kwe ka nyochaa ojiji nke weebụsaịtị. Google AdSense na-ejikwa mgbama weebụ a na-akpọ (ngosi ndị a na-adịghị ahụ anya). A na-eji mgbama weebụ ndị a iji nyochaa ozi dịka njem ndị njem na ibe ndị a.
Ihe ọmụma nke kuki na mgbama weebụ na-eji ojiji weebụ a (gụnyere adreesị IP gị) na nnyefe nke usoro mgbasa ozi na-ebute ma chekwaa Google na sava na USA. Ozi a nwere ike ịkọrọ Google na ndị mmekọ Google. Otú ọ dị, Google agaghị ejikọta adreesị IP gị na data ndị ị chekwaara.
Ichekwa kuki AdSense sitere na Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Onye na-arụ ọrụ webụsaịtị nwere ezigbo mmasị na nyochara akparamagwa ọrụ iji bulie ma weebụsaịtị ya na mgbasa ozi ya.
Ị nwere ike igbochi nwụnye kuki site na ịmepụta ihe nchọgharị gị na ya; Otú ọ dị, biko mara na na nke a, ị gaghị enwe ike iji atụmatụ niile nke weebụsaịtị a ruo n'ókè zuru oke. Site n'iji weebụsaịtị a, ị kwenyere nhazi data banyere gị site na Google na ụzọ na maka ebumnuche ndị e depụtara n'elu.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na-eme ka atụmatụ nke Google Analytics Remarketing jikọtara ike nke Google AdWords na DoubleClick. Onye nyere ya bụ Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Akụkụ a na-enye ndị mgbasa ozi Google Analytics remarketing adọrọ na njikọta nke atụmatụ Google AdWords na Google DoubleClick. N'ụzọ dị otú a, enwere mmasị, ozi mgbasa ozi ahaziri iche nke enyere gị aka dabere na ojiji mbụ gị na omume nchụpụ na ngwaọrụ (eg ekwentị mkpanaaka) nwekwara ike gosipụta na ngwaọrụ ọzọ (eg mbadamba ma ọ bụ PC).
Ozugbo i nyere nkwenye gị, Google ga-akpakọrịta weebụ gị na akụkọ ihe nchọgharị na akaụntụ Google gị maka nzube a. N'ụzọ ahụ, otu ozi mgbasa ozi ahaziri iche nwere ike ịpụta na ngwaọrụ ọ bụla ị banyere na akaụntụ Google gị.
Iji kwado atụmatụ a, Google Analytics nakọtara Google ID-authentication nke ndị ọrụ na-ejikọta na nchịkọta data Google Analytics iji kọwaa ma mepụta ndị mmadụ maka nkwalite mgbasa ozi cross-device.
Ị nwere ike ịpụ apụ kpamkpam site na nkwurịta okwu na-agafe agafe / ezubere iche site na igbanyụọ mgbasa ozi ahaziri iche na Akaụntụ Google gị; soro njikọ a: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
The nchịkọta nke weghaara data gị Google akaụntụ nanị dabeere na nkwenye gị, i nwere ike n'okpuru ma ọ bụ kagburu na Google (Art. 6 para. 1 akwụkwọ ozi a DSGVO). Mgbe data collection arụmọrụ na-adịghị merged n'ime gị Google akaụntụ (n'ihi na ihe atụ, n'ihi na i nwere a Google akaụntụ ma ọ bụ ha na-emegide mmakọ) dabeere na nchọpụta nke data ụdị. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Enwere mmasị ziri ezi site n'eziokwu ahụ na onye ọrụ weebụ nwere mmasị na nchịkọta na-enweghị aha nke ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ maka ndị ọrụ mgbasa ozi.
Maka ozi ndị ọzọ na nzuzo, hụ Nzuzo Nzuzo Google na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Google AdWords na ntụgharị Google
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji Google AdWords. AdWords bụ usoro mgbasa ozi n'ịntanetị nke Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA94043, United States ("Google").
Dịka akụkụ nke Google AdWords, anyị na-eji nsonaazụ a na-akpọ ntọghata. Mgbe ị pịrị na mgbasa ozi nke Google na-arụ, a na-edozi kuki nchigharị ntụgharị. Kuki bụ obere faịlụ ederede na ihe nchọgharị Ịntanetị na-echekwa na kọmputa onye ọrụ. Kuki ndị a ejighị ezi nkwado mgbe ụbọchị 30 na-ejighị ya maka njirimara onwe onye nke ndị ọrụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-eleta ibe ụfọdụ nke ibe weebụ a ma kuki ahụ anaghị agwụ ma, Google ma anyị nwere ike ịmata na onye ọrụ ahụ pịrị na mgbasa ozi ma weghaara ya gaa na ibe a.
Onye ahịa Google AdWords ọ bụla na-enweta kuki dị iche. Enweghị ike ịchọta kuki site na ebe nrụọrụ weebụ nke ndị mgbasa ozi. A na-eji ozi nchịkọta na-eji kuki kọnghata iji meepụta ọnụ ọgụgụ ntụgharị maka mgbasa ozi AdWords bụ ndị wepụtara maka nsuso nsụgharị. A na-agwa ndị ahịa ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-adịrị mgbasa ozi ha ma weghaara ha gaa na ibe mkpado ntọala. Otú ọ dị, ha anaghị enweta ozi na-akọwapụta ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike itinye aka na nsuso, ị nwere ike ịpụpụ na nke a site n'iji nwayọọ nwayọọ kwụsị kuki Google Conversion Tracking site na ihe nchọgharị Ịntanetị n'okpuru Mmasị Onye Ọrụ. A gaghị etinye gị na ọnụ ọgụgụ nsụgharị ntọghata.
Nchekwa nke "kuki ndị a kọngharị" dabeere na Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Onye ọrụ weebụ ahụ nwere mmasị ziri ezi n'ịtụle omume onye ọrụ iji wee nwee ike ịme ma ma weebụsaịtị ma mgbasa ozi ya.
Maka ama ndi ozo gbasara Google AdWords na nyocha Google Conversion, lee Nzuzo Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Anyị na-eji "Google reCAPTCHA" (mgbe "reCAPTCHA") na weebụsaịtị anyị. Onye nyere ya bụ Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Na reCAPTCHA a ga-enyocha ma ntinye data na ebe nrụọrụ weebụ anyị (dịka na ụdị kọntaktị) sitere n'aka mmadụ ma ọ bụ site na mmemme akpaaka. Maka nke a, reCAPTCHA nyochaa omume nke onye nleta weebụ dị na njirimara dị iche iche. Ntụle a na-amalite na-akpaghị aka ozugbo onye na weebụ ahụ bịara abanye na ebe nrụọrụ weebụ. Maka nyochaa, reCAPTCHA na-enyocha ozi dị iche iche (dịka adreesị IP, oge nke onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ na-arụ na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ mmegharị nnụnụ nke onye ọrụ) na-eme. A ga-ezigara data ahụ gbasara data a ga-ezigara na Google.
Ihe nyochaa reCAPTCHA zuru oke. A gwaghị ndị ọbịa na saịtị na nyocha na-ewere ọnọdụ.
Usoro nhazi ahụ dabeere na Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere mmasị dị mma na ichedo ebe nrụọrụ weebụ ya site na nledo na akpaghasị aka na SPAM.
Iji nwetakwuo ihe omuma banyere Google reCAPTCHA na iwu nzuzo nke Google, biko gaa na njikọ ndị a: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ na https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.
Ebe nrụọrụ anyị na-eji Facebook pixel pixel maka ntụgharị ntụgharị, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
N'ụzọ dị otú a, omume nke ndị ọbịa na saịtị ahụ nwere ike ịdebe mgbe a dụgharịrị ha gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-eweta site na ịpị na mgbasa ozi Facebook. N'ihi ya, a ga-enyocha njirimara nke mgbasa ozi Facebook maka nyocha ndekọ ọnụahịa na nke ahịa na atụmatụ mgbasa ozi n'ọdịnihu kachasị mma.
Ihe anakọtara amaghi aha anyi dika onye oru nke weebụsaịtị a, anyi enweghi ike ichoputa ihe ndi mmadu bu. Otú ọ dị, Facebook na-echekwa data ma dezie ya, nke mere na njikọ nke profaịlụ onye ọrụ ọ bụla ga-ekwe omume na Facebook data maka atụmatụ mgbasa ozi nke onwe ha, dịka Facebook Data Iji Policy nwere ike iji. N'ihi ya, Facebook nwere ike ime ka mgbasa ozi gosipụta na Facebook na n'èzí Facebook. Enwere ike iji mmetụta nke ọrụ data mee ka anyị bụrụ onye na-ahụ maka ọrụ.
Na iwu nzuzo nke Facebook ị ga-achọta ozi ndị ọzọ na nchebe nke nzuzo gị: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Ị nwekwara ike iji remarketing atụmatụ "omenala Science" na Mgbasa ozi esighi na ngalaba n'okpuru https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen anya. Iji mee nke a, ị ga-abanye na Facebook.
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ Facebook, ịnwere ike iwepu mgbasa ozi sitere na Facebook sitere na Facebook na weebụsaịtị Weebụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Europe: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
7. Akwụkwọ Akụkọ
Akwụkwọ Akụkọ data
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta akwụkwọ akụkọ ahụ a na-enye na weebụsaịtị ahụ, anyị chọrọ adreesị ozi-e site na gị, yana ozi nke na-enye anyị ohere iji nyochaa na ị bụ onye nwe adreesị ozi-e nke enyere na ị kwenyere ịnata akwụkwọ akụkọ , Enweghi ike ịnakọta data ọzọ ma ọ bụ naanị na iji aka gị laghachi azụ. Anyị na-eji data a nanị maka nnyefe nke ozi a rịọrọ ma ghara inyefe ya na ndị ọzọ.
Nhazi nke data abanye n'ime akwụkwọ ndebanye aha akwụkwọ ahụ na-ewere ọnọdụ naanị n'ihi nkwenye gị (Art 6 para. 1 lit. a DSGVO). A kwadoro nkwenye nke nchekwa data, adreesị ozi-e na iji ha maka izipụ akwụkwọ akụkọ ahụ n'oge ọ bụla, dịka ọmụmaatụ site na njikọ "wepu aha" na akwụkwọ akụkọ ahụ. Iwu iwu nke arụ ọrụ nhazi nke data arụkwaghịrị na-anọgide na-adịghị emetụta site nwepụ.
A ga - echekwa data nke anyị na - ede maka anyị iji nweta akwụkwọ akụkọ ahụ site n'aka anyị site n'akwụkwọ akụkọ ahụ ruo mgbe ị ga - ehichapụ ma ga - ehichapụchaa mgbe ịmechara akwụkwọ akụkọ ahụ. Data echekwara maka nzube ndị ọzọ na anyị (dịka adreesị ozi-e maka mpaghara ndị òtù) ka na-enweghị ntụpọ.
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji ozi MailChimp maka izipụ akwụkwọ akụkọ. Onye na-enye ihe bụ Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, 5000 Suite, Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp bụ ọrụ nke, n'etiti ihe ndị ọzọ, a ga-ahazi ma nyochaa ozi akwụkwọ ozi. Ọ bụrụ na itinye data maka ebumnuche nke ndebanye aha ala (dịka adreesị ozi-e), a na-echekwa ha na sava MailChimp na USA.
A na-akwado MailChimp n'okpuru Nzube Nzuzo US-US. Nzuzo Nzuzo bụ nkwekọrịta n'etiti European Union (EU) na US iji hụ na ha na-akwado ụkpụrụ nzuzo nke Europe na United States.
Site n'enyemaka nke MailChimp, anyị nwere ike nyochaa ozi mgbasa ozi anyị. Mgbe ị mepee e-mail zitere na MailChimp, faịlụ nke gụnyere na e-mail (a na-akpọ mgbama weebụ) jikọtara sava MailChimp na United States. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ikpebi ma ọ bụrụ na e mepeela ozi ozi ala na nke njikọ ya. Tụkwasị na nke ahụ, anakọtara ozi nlekota (dika oge nlọghachite, adreesị IP, ụdị ihe nchọgharị na sistemụ arụmọrụ). A gaghị enyefe ozi a na onye na-enweta akwụkwọ ozi dị iche. A na-eji ha eme ihe nanị maka nyocha akụkọ banyere nchịkọta akụkọ. A pụrụ iji nsonaazụ ndị a mee ihe ka mma iji dozie akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu n'ọdịmma nke onye nnata.
Ọ bụrụ na ịchọghị nyochaa site na MailChimp, wepụ aha na ala. Maka nke a, anyị na-enye njikọ na ozi ọ bụla. Ọzọkwa, ị nwere ike wepu aha na akwụkwọ akụkọ ahụ kpọmkwem na weebụsaịtị.
Usoro data na-ewere ọnọdụ na nkwenye gị (Art 6 para. 1 lit. a DSGVO). Ị nwere ike iwepu nkwenye a n'oge ọ bụla site na ịdepu aha na ala. Iwu iwu nke arụ ọrụ nhazi nke data arụkwaghịrị na-anọgide na-adịghị emetụta site nwepụ.
A ga-echekwa data anyị tinyere maka maka inweta inweta akwụkwọ akụkọ ahụ site na akwụkwọ akụkọ ahụ ruo mgbe ewepụrụ ya na akwụkwọ akụkọ ahụ, ma, mgbe ị na-edepụghị ya na akwụkwọ akụkọ ahụ, ehichapụ ma site na sava anyị na site na sava MailChimp. Data echekwara maka nzube ndị ọzọ na anyị (dịka adreesị ozi-e maka mpaghara ndị òtù) ka na-enweghị ntụpọ.
Maka nkọwa, lee Nzuzo Nzuzo nke MailChimp na: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Mmezu nke nkwekọrịta nhazi data
Anyị nwere ihe a na-akpọ "Data Processing Agreement" na MailChimp, nke anyị na-ede MailChimp iji kpuchie data nke ndị ahịa anyị ma ghara inyefee ha na ndị ọzọ. Nkwekọrịta a nwere ike ile anya na njikọ ndị a: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.
8. Ngwa na ngwaọrụ
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na-eji plugins sitere na peeji nke YouTube kwadoro Google. Onye njikwa saịtị bụ YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Mgbe ị gara n'otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere ike itinye na YouTube, ị ga-ejikọta na sava nke YouTube. Ọ na-agwa ihe nkesa YouTube nke nke ibe anyị ị gara.
Ọ bụrụ na ịbanye n'ime akaụntụ YouTube gị, YouTube ga-enye gị ohere ịmekọrịta omume nchọgharị gị ozugbo na profaịlụ onwe gị. Ị nwere ike igbochi nke a site na ịbanye na akaụntụ YouTube gị.
Ojiji nke YouTube bụ maka mmasị nke ngosi nke ntanetị anyị. Nke a bụ ihe dị mma nke pụtara na Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Maka ama ndi ozo gbasara uzo esi eji ozi ndi ozo, biko gaa na Nzuzo Nzuzo YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na-eji plugins esi na Vimeo vidiyo. Onye na-enye ihe bụ Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA.
Ọ bụrụ na ị gaa na saịtị ọ bụla a kwadebere na ngwa mgbakwunye Vimeo, ị ga - ejikọta na sava Vimeo. Nke a na-agwa ihe nkesa Vimeo nke ibe anyị ị gara. Tụkwasị na nke a, Vimeo nwetara adreesị IP gị. Nke a na-emetụta ma ọ bụrụ na ịbanyeghị na Vimeo ma ọ bụ enweghị akaụntụ na Vimeo. A na-ebute ihe ọmụma ahụ Vimeo na-ezigara na sava Vimeo na United States.
Ọ bụrụ na ịbanye na akaụntụ Vimeo gị, ị na-ekwe ka Vimeo na-akpakọrịta omume gị na-asọ asọ ozugbo na profaịlụ onwe gị. Ị nwere ike igbochi nke a site na ịbanye na akaụntụ Vimeo gị.
Maka ama ndi ozo gbasara esi emeso data njirimara, lee iwu nzuzo Vimeo na: https://vimeo.com/privacy.
Google Web Akara ókwú
Ụlọ ọrụ a na-eji akara akwụkwọ weebụ, nke Google nyere, maka nchịkọta edo nke nchịkọta. Mgbe ị na-akpọ elu peeji nke, ihe nchọgharị gị na-eburu ụyọkọ weebụ achọrọ dị n'ime oghere ihe nchọgharị gị iji gosipụta ederede na mkpụrụokwu n'ụzọ ziri ezi.
Iji mee nke a, ihe nchọgharị ị na-eji ga-ejikọ na sava Google. N'ihi ya, Google na-amụta na e webatara weebụsaịtị anyị site na adreesị IP gị. Ojiji nke Google Web Fonts bụ maka mmasị na-egosi na anyị na-egosi na ịntanetị ọrụ. Nke a bụ ihe dị mma nke pụtara na Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị anaghị akwado ụda weebụ, a ga - eji kọmputa gị rụọ ọrụ ndabara.
Maka ama ndi ozo banyere Google Web Fonts, lee https://developers.google.com/fonts/faq na iwu nzuzo nke Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Ebe a na - eji Google Maps site na API. Onye nyere ya bụ Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Iji jiri atụmatụ Google Maps, ọ dị mkpa ịchekwa adreesị IP gị. A na-ebutekarị ozi a ma debe ya na sava Google na United States. Onye na-enye saịtị a enweghị mmetụta na ntinye data a.
Ojiji nke Google Maps bụ maka mmasị ngosi nke ntanetị anyị na ntanetị na mfe ịchọta nke ebe anyị gosipụtara na weebụsaịtị. Nke a bụ ihe dị mma nke pụtara na Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Maka ama ndi ozo gbasara esi edozi data onye ozo, biko gaa na Nzuzo Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
9. Marketingzụ ahịa n'ịntanetị na mmemme mmekọ
Ihe mmemme Amazon
Ndị ọrụ nke saịtị ahụ na-ekere òkè na Mmemme Ndị Mmekọrịta Amazon EU. Na ibe anyị bụ mgbasa ozi Amazon na njikọ n'akụkụ Amazon.de gụnyere, ebe anyị nwere ike ịnweta ego na mgbasa ozi mgbasa ozi. Amazon na-eji kuki iji mata ebe iwu ahụ si malite. Nke a ga - eme ka Amazon mara na ị gụla njikọ njikọta na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Nchekwa nke "Amazon Cookies" dabeere na Art. 6 lit. f DSGVO. Onye ọrụ weebụ ahụ nwere mmasị dị mma na nke a, ebe ọ bụ naanị site na kuki ahụ, a ga-ekpebi ọnụọgụ ụgwọ ọrụ ya.
Maka ama ndi ozo banyere ojiji data Amazon, biko gaa na Ama Amụma Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Na weebụsaịtị anyị, anyị na-akwụ ụgwọ site PayPal. Provider nke ụgwọ ọrụ bụ PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the "PayPal").
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịkwụ ụgwọ site na PayPal, a ga-eziga nkwụnye ụgwọ ị ga-abanye na PayPal.
Ịnyefe data gị na PayPal dabeere na Art. 6 para. 1 lit. DSGVO (nkwenye) na Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (nhazi iji mezuo nkwekọrịta). Ị nwere nhọrọ iji wepụ nkwenye gị na nhazi data n'oge ọ bụla. Mwepu anaghị emetụta irè ọrụ nhazi data.
Na weebụsaịtị anyị, anyị na-akwụ ụgwọ site na "Sofortüberweisung". Onye na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ a bụ Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (dịka "Sofort GmbH").
Site n'enyemaka nke usoro "Sofortüberweisung" anyị na-enweta nkwenye ụtụ site na Sofort GmbH na ozugbo ma nwee ike ịmalite ozugbo ịrụ ọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ị kpebiri iji usoro "Sofortüberweisung" kwụọ ụgwọ, biko nyefee PIN na TAN dị mma na Sofort GmbH, nke ị nwere ike ịbanye na akaụntụ ịdenye ego n'ịntanetị. Sofort GmbH na-echekwa ego gị mgbe ọ na-abanye ma na-enyefe anyị ego ahụ site na iji TAN i debere. N'ikpeazụ, ọ ga-ezitere anyị nkwenye azụmahịa n'egbughị oge. Mgbe ịbanye, ahịa gị, akara amaokwu nke akara akwụmụgwọ na ịdị adị nke akaụntụ ndị ọzọ na ịchekwa akwụkwọ na-akpaghị aka.
Na mgbakwunye na PIN na TAN, a ga-ebufe data nkwụnye ụgwọ gị tinyere data nke onwe gị na Sofort GmbH. Data nkeonwe bụ aha mbụ, aha nna, adreesị, nọmba ekwentị, adreesị ozi-e, adreesị IP na ikekwe data ọzọ achọrọ maka nhazi ịkwụ ụgwọ. Ntinye nke data a dị mkpa iji gosipụta njirimara gị karịa obi abụọ ma gbochie ịghọ aghụghọ.
Ịnyefe data gị na Sofort GmbH dabeere na Art. 6 para. 1 lit. DSGVO (nkwenye) na Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (nhazi iji mezuo nkwekọrịta). Ị nwere nhọrọ iji wepụ nkwenye gị na nhazi data n'oge ọ bụla. Mwepu anaghị emetụta irè ọrụ nhazi data.
Maka nkọwa na ịkwụ ụgwọ na Sofortüberweisung hụ njikọ ndị a: https://www.sofort.de/datenschutz.html na https://www.klarna.com/sofort/.
Tinyere ihe ndị ọzọ, anyị na-enye ịkwụ ụgwọ site na Paydirekt na weebụsaịtị anyị. Onye na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ a bụ Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Germany (nke a bụ "Paydirekt").
Ọ bụrụ na ị mezue ugwo site na Paydirekt, Paydirekt na-anakọta data azụmahịa dị iche iche ma bufee ha na ụlọ akụ ebe ị debara aha na Paydirekt. Na mgbakwunye na data achọrọ maka ịkwụ ụgwọ, Paydirekt na-anakọta data ndị ọzọ dịka akụkụ nke nhazi azụmahịa, dịka ozi nnyefe ma ọ bụ ihe ọ bụla n'otu ụlọ ahịa.
Onye na-akwụ ụgwọ na-akwadozi azụmahịa ahụ site na iji usoro nyocha nke echekwara na akụ. N'ikpeazụ, a ga-ebufe ego ịkwụ ụgwọ site akaụntụ gị na akaụntụ anyị. Anyị ma ọ bụ ndị ọzọ anaghị enweta ozi akaụntụ gị.
Maka nkọwa na ịkwụ ụgwọ na Paydirekt, lee usoro na ọnọdụ na iwu nzuzo nke Paydirekt: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.
1. Nchịkọta nke nchedo data
Ònye na-ahụ maka nchịkọta data na weebụsaịtị a?
Ihe nchịkọta anakọtara na weebụsaịtị a na-edozi site n'aka onye ọrụ weebụ. Enwere ike ịchọta kọntaktị kọntaktị nke onye ọrụ ahụ na ọkwa iwu chọrọ.
A na-anakọta data ụfọdụ mgbe ị na-enye ya anyị. Dịka ọmụmaatụ, nke a nwere ike ịnwe ụdị kọntaktị.
A na-anakọta data ndị ọzọ na-akpaghị aka site na usoro IT anyị mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ. Ihe ndekọ ndị a bụ isi ọrụ nchịkwa. Dịka ihe nchọgharị na sistemụ arụmọrụ. A na-anakọta data ndị a ozugbo ị banye na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
A na-anakọta ọdịnaya nke weebụsaịtị. A pụrụ iji data ndị ọzọ nyochaa otú ndị ọbịa si eji saịtị ahụ.
Ị nwere ikike ịnweta ozi banyere data echekwara gị, mmalite ya, ndị nnata ya, na nzube nke nchịkọta ya na enweghị ụgwọ. Edozila gị, gbochie, ma ọ bụ ehichapụ. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla site na iji adreesị e nyere na ọkwa iwu. Ị nwekwara ike, n'ezie, tinye akwụkwọ mkpesa na ndị ọrụ iwu.
Nchịkọta na ngwaọrụ ndị ọzọ
Mgbe ị na-aga na ebe nrụọrụ weebụ anyị, a na-enyocha nchịkọta akụkọ banyere omume gị. Nke a na-emekarị site na kuki na nchịkọta. Nyocha nke omume ị na-asọfụ bụ nke a na-amaghị aha, yabụ na anyị agaghị enwe ike ịmata gị site na data a. Ị nwere ike ịjụ nyocha a ma ọ bụ site na iji ụfọdụ ngwaọrụ. Enwere ike ịchọta ozi zuru ezu na iwu nzuzo nzuzo.
Ị nwere ike ịjụ nyocha a. Anyị chọrọ ịgwa gị banyere otu esi eme nhọrọ gị n'akụkụ a.
Ndị ọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ a na-echedo data nkeonwe gị nke ọma. Anyị na-eme ka data nkeonwe gị dị ka nzuzo na dịka iwu nchedo data na iwu nzuzo a.
Ọ bụrụ na ị na-eji saịtị weebụ a, a ga-anakọta ya. Ozi nkeonwe bụ data ọ bụla ị ga-amata. Iwu nzuzo a na-akọwa ihe anyị na-anakọta na ihe anyị jiri ya maka. Ya mere ọ na-akọwa otú na ebumnuche nke a mere.
Biko rịba ama na ntinye data site n'Ịntanet (dika site na nkwukọrịta email) nwere ike ịdabere na nchebe nchebe. Nchekwa zuru oke nke data gị site na ịnweta ndị ọzọ agaghị ekwe omume.
Rịba ama banyere otu ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ a
Ndị otu maka nhazi data na ebe nrụọrụ weebụ a bụ:
Ndị Board nọchitere ya: Jan Schumacher
Onye na-ahụ maka ọrụ bụ onye nkịtị ma ọ bụ onye iwu kwadoro ma ọ bụ kpebie ihe ọzọ na nzube na usoro nhazi data nke onwe (aha, adreesị email, wdg).
Nwepu nkwenye gị na nhazi data gị
Ọtụtụ arụmọrụ data na-ekwe omume na nkwenye gị kwupụtara. Ị nwere ike iwepu nkwenye gị n'oge ọ bụla na mmetụta n'ọdịnihu. Ozi na-ezighi ezi na-eme ka arịrịọ a zuo oke. A na-edozi data ahụ tupu anyị anata arịrịọ gị.
Ikwesịrị iji mkpesa ndị isi obodo mee mkpesa
Ọ bụrụ na e mebiri iwu nchedo data, onye nwere nsogbu nwere ike ịde mkpesa na ndị ọrụ iwu. Onye ọrụ ikike iwu maka ikike nchedo data bụ onye nche nche data nke steeti Germany nke ụlọ ọrụ anyị nọ n'isi ya. A nwere ike ịchọta ndepụta nke ndị nche nchekwa data na nkọwa kọntaktị ha na njikọ na-esonụ: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Na ọkọlọtọ, usoro nhazi nke igwe nwere ike ịnwe usoro ma ọ bụ usoro iji wuchaa ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe data gaa na onye ọzọ na-ahụ maka ọrụ, a ga-eme nke a ruo n'ókè ọ ga-ekwe omume.
Saịtị a na-eji SSL ma ọ bụ TXS ezoro ezo maka ihe nchedo na maka nchebe nke ọdịnaya nzuzo, yana ajụjụ ị na-ezitere anyị dị ka onye na-ahụ maka ọrụ. Ị nwere ike jikọọ na adreesị ozi-e gị ma ọ bụrụ na ọ gbanwee site na "http: //" na "https: //" na akara mkpọchi gosipụtara na nchịkwa adreesị ihe nchọgharị gị.
Ọ bụrụ na ezipụ SSL ma ọ bụ TLS arụ ọrụ, data enweghị ike ịgụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iziga anyị ozi ịkwụ ụgwọ (dịka nọmba akaụntụ maka ụgwọ nkwụnye ụgwọ), anyị ga-achọ ka data a mezie ugwo gị.
Ịkwụ ụgwọ azụmahịa site na iji ugwo ịkwụ ụgwọ (Visa / MasterCard, nhazi ego) bụ naanị site na ezoro ezo SSL ma ọ bụ njikọ TLS. Ị nwere ike jikọọ na adreesị ozi-e gị ma ọ bụrụ na ọ gbanwee site na "http: //" gaa na "https: //" na akara ngosi mkpọchi.
N'ihe gbasara nkwupụta ezoro ezo, nkọwa ndị ịkwụ ụgwọ enweghị ike ịgụ site na ndị ọzọ.
Dị ka iwu kwadoro, a na-edozi ya n'oge ọ bụla na ozi na-enweghị ụgwọ. I nwere ike iji data a dezie, gbochie ma ọ bụ ehichapụ. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla iji adreesị e nyere na ọkwa iwu anyị.
Mmegide megide ozi-e nkwado
Anyị na-ekwupụta n'ụzọ doro anya iji ihe ọ bụla dị na ọkwa iwu. Onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ na-akwado ikike ime ihe iwu ma ọ bụrụ na a natara mgbasa ozi mgbasa ozi akwadoghị, dị ka email spam.
3. Onye nche nche data
Ụfọdụ n'ime ibe weebụ anyị na-eji kuki. Kuki anaghị emerụ kọmputa gị ma ghara inwe nje ọ bụla. Kuki na-enyere aka mee ka ebe nrụọrụ weebụ anyị nwekwuo mmekọrịta enyi na enyi, ịrụ ọrụ nke ọma, na nchekwa. Kuki bụ obere faịlụ ederede echekwara na kọmputa gị ma chekwaa site na ihe nchọgharị gị.
A na-akpọ ha "kuki nchịkọta." Ha na-ehichapụ ya ozugbo mgbe nleta gị. Kuki ndị ọzọ na-anọgide na-echekwa ngwaọrụ gị ruo mgbe i wepụ ha. Kuki ndị a na-eme ka o kwe omume ịmata ihe nchọgharị gị mgbe ị gara na saịtị ahụ.
Ị nwere ike ịhazi kuki gị iji jiri ha mee ihe site na ikpe. Mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị, ị nwere ike ịbanye na usoro ịkagbu usoro gị. Ịkwụsị kuki nwere ike ịkwụsị ọrụ nke weebụsaịtị a.
6 nke 1 nke XNUMX, akwụkwọ f nke DSGVO. Onye ọrụ weebụ ahụ nwere mmasị dị mma na nchekwa nke kuki. Ọ bụrụ na echekwara kuki ndị ọzọ, a ga-emeso ha n'otu n'otu na iwu nzuzo a.
Faịlụ ndekọ ndekọ
Onye na-eweta weebụsaịtị na-anakọta ma na-echekwa ozi na ihe nchọgharị gị na-ebute anyị na "faịlụ log faịlụ". Ndị a bụ:
Ejiri usoro eji
Aha njirimara nke kọmputa na-abata
Oge nke ihe nkesa
A gaghị agụnyere data ndị a site na isi mmalite ndị ọzọ.
Ihe ndabere maka nhazi data bụ Art. 6 (1) (b) DSGVO, nke nyere ikikere nke data iji mezuo nkwekọrịta ma ọ bụ maka iwu.
Ị ga-ezitere anyị ajụjụ site na ụdị kọntaktị ahụ, anyị ga-anakọta data abanye n'ụdị ahụ, tinyere nkọwa kọntaktị ị nyere, na ajụjụ ọ bụla nlekota. Anyị anaghị ekerịta ozi a n'enweghị ikike.
Ya mere, anyị chọrọ, hazie data ọ bụla ị banyere na mpempe akwụkwọ naanị site n'ikike gị. 6 (1) (a) GDPR. Ị nwere ike iwepu nkwenye gị n'oge ọ bụla. Ozi na-ezighi ezi na-eme ka arịrịọ a zuo oke. A na-edozi data ahụ tupu anyị anata arịrịọ gị.
Anyị chọrọ ijigide data ị nyere na mpempe akwụkwọ ahụ ruo mgbe ị rịọrọ ya nhichapụ, wepụ nkwenye gị maka nchekwa ya, ma ọ bụ nzube maka nchekwa ya agaghịzi adị (eg mgbe ị mechara arịrịọ gị). Ntuziaka ọ bụla a chọrọ, ka ndokwa a ghara imetụta gị.
Ị nwere ike ịdebanye aha na weebụsaịtị anyị ka ịnweta ọrụ ndị ọzọ enyere ebe a. A ga-eji data ntinye mee ihe maka nzube nke iji ya. A ghaghị inye nkọwa zuru ezu nke a rịọrọ n'oge ndebanye aha. Ma ọ bụghị ya, anyị chọrọ ịjụ ndebanye aha gị.
Iji gwa gị banyere mgbanwe ndị dị mkpa dịka ndị na-abawanye na saịtị anyị ma ọ bụ mgbanwe ntanetị, anyị ga-eji adreesị ozi-e ahụ kpọmkwem n'oge ndebanye aha.
6 (1) (a) GDPR. Ị nwere ike iwepu nkwenye gị n'oge ọ bụla na mmetụta n'ọdịnihu. Ozi na-ezighi ezi na-eme ka arịrịọ a zuo oke. A na-edozi data ahụ tupu anyị anata arịrịọ gị.
Anyị chọrọ ịnọgide na-echekwa data anakọtara n'oge ndebanye aha ma ọ bụrụhaala na ị debere aha na weebụsaịtị anyị. Oge nchebe iwu na-anọgide na-emetụta.
Kama ịdenye aha na ebe nrụọrụ weebụ anyị, ị nwekwara ike idebanye aha iji Facebook Jikọọ. Ọrụ a bụ Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịdebanye aha na Facebook Jikọọ ma pịa "Nbanye na Facebook" ma ọ bụ "Jikọọ na Facebook" mkpọchi, ị ga-akpaghị aka na-ibugharị gaa na Facebook ikpo okwu. N'ebe ahụ ị nwere ike ịbanye na njirimara na paswọọdụ Facebook gị. Nke a ga - ejikọta profaịlụ Facebook gị na weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ anyị. Njikọ a na-enye anyị ohere ịnweta data gị echekwara na Facebook. Gụnyere karịsịa gị:
Adreesị ozi-e nyere Facebook
Ndị enyi Facebook
A ga-eji data a dozie, nye, ma hazie akaụntụ gị.
Maka ama ndi ozo, lee Nzuzo nke Facebook na Amụma Nzuzo. Enwere ike ịchọta ha https://de-de.facebook.com/about/privacy/ na https://www.facebook.com/legal/terms/.
Ịhapụ ihe na mkpokọta a
Ọ bụrụ na ị na-eji comment ọrụ na saịtị a, oge ya na nke ị kere comment na gị email address ga-echekwara alongwith gị ikwu, nakwa dị ka aha njirimara gị, ma ị na na-ikenye anonymously.
Ọrụ anyị na-echekwa adreesị IP nke ndị ọrụ ahụ na-eziga ihe. Ebe ọ bụ na anyị adịghị elele ya na saịtị anyị tupu ha agaa, anyị kwesịrị ịmara banyere nke a.
Na-edebanye aha na ndepụta nri
Dị ka onye ọrụ nke saịtị a, ịnwere ike ịbanye banye aha. Adreesị ozi-e gị ga-enyocha ozi email. Ị nwere ike wepu aha na ọrụ a n'oge ọ bụla site na ịpị njikọ na ozi-e. A ga-ejide ya, ma ọ bụrụ na ị debere anyị data a maka nzube ọzọ ma ọ bụ n'ebe ọzọ, a ga-edebe ya.
Ogologo oge ole ka echekwara ihe
A na-ede ihe na data metụtara (dịka adreesị IP) na weebụsaịtị.
6 (1) (DSGVO). Ị nwere ike iwepu nkwenye gị n'oge ọ bụla na mmetụta n'ọdịnihu. Ozi na-ezighi ezi na-eme ka arịrịọ a zuo oke. A na-edozi data ahụ tupu anyị anata arịrịọ gị.
Anyị na-anakọta, nhazi, ma jiri data onwe onye naanị dị ka ọ dị mkpa iji guzobe ma ọ bụ gbanwee mmekọrịta iwu na anyị (data nnabata). A na-eme nke a site na Art. 6 (1) (b) DSGVO, nke na-enye nhazi data iji mezuo nkwekọrịta ma ọ bụ maka mmalite nke nkwekọrịta. Anyị na-anakọta, dezie ma jiri data nkeonwe gị mgbe ị na-enweta na ebe nrụọrụ weebụ anyị (data ojiji) naanị ruo n'ókè dị mkpa iji mee ka ị nweta ọrụ anyị ma ọ bụ ịnye gị ụgwọ maka otu.
Achọtara ndị ahịa ndị ahịa ga-agwụchaa mgbe ha gwụchara ma ọ bụ kwụsị ọrụ azụmahịa. Oge nchechi iwu na-adighi emetụta ya.
A na-enyefe data mgbe ị na-abanye na nkwekọrịta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ụlọ ahịa, na izipu ozi
E nyere gị iji nyefee onye ahịa gị ngwaahịa gị. A gaghị eziga data gị maka nzube ọ bụla ma ọ bụrụ na ị nyerela ikikere ime otú ahụ. A gaghị eme ka data gị mara ndị ọzọ maka atụmatụ mgbasa ozi na-enweghị nkwenye gị.
Data gbanwere mgbe ịbanye maka ọrụ na ọdịnaya dijitalụ
E nyere gị ka ịhazi gị ịkwụ ụgwọ.
A gaghị eziga data gị maka nzube ọ bụla ma ọ bụrụ na ị nyerela ikikere ime otú ahụ. A gaghị eme ka data gị mara ndị ọzọ maka atụmatụ mgbasa ozi na-enweghị nkwenye gị.
Facebook plugins (Dị ka bọtịnụ & Share)
Ụlọ ọrụ anyị gụnyere plugins maka netwọk mmekọrịta Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Enwere ike iji Facebook logo ma ọ bụ bọtịnụ dị na saịtị anyị. Maka nyocha nke Facebook plugins, lee https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Mgbe ị gara na saịtị anyị, njikọ dị n'etiti ihe nchọgharị gị na sava Facebook dị na ntọala site na ngwa mgbakwunye. Nke a na-enyere gị aka ịga na saịtị anyị site na adreesị IP gị. Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ Facebook "Dị ka" mgbe ịbanye na akaụntụ Facebook gị, ị nwere ike ịhụ ọdịnaya nke ibe Facebook anyị. Nke a na-enye Facebook ohere ịga na saịtị anyị na akaụntụ njirimara gị. Biko mara na dị ka onye ọrụ nke saịtị a, anyị enweghị ihe ọmụma banyere ọdịnaya dị na Facebook ma ọ bụ Facebook. Maka ozi ndị ọzọ, biko hụ iwu nzuzo nke Facebook na https://de-de.facebook.com/policy.php.
Ọ bụrụ na ịnweghị Facebook, biko banye na akaụntụ Facebook gị.
Ọrụ ndị a bụ Twitter Inc., 1355 Market Street, 900 Suite, San Francisco, CA 94103, USA. Mgbe ị na-eji Twitter na ọrụ "Retweet", ị jikọọ na akaụntụ Twitter gị ma mee ka ndị ọrụ ndị ọzọ mara. N'ime nke a, data chọrọ ka a kpọga ya Twitter. Anyị ga-achọ ịkọwapụta na, dị ka onye na-enye ibe ndị a, anyị enweghị ihe ọmụma banyere ọdịnaya ma ọ bụ otú Twitter ga-esi jiri ya. Maka ozi ndị ọzọ gbasara iwu nzuzo nke Twitter, biko gaa https://twitter.com/privacy.
Nhọrọ nzuzo gị na Twitter nwere ike gbanwee na ntọala akaụntụ gị na https://twitter.com/account/settings.
Akwụkwọ anyị jiri ọrụ Google+. Ọ bụ Google Inc. na-ejikwa ya, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Nchịkọta na ikpughe ozi: Iji bọtịnụ Google + 1 nyere gị ohere ịmepụta ozi n'ụwa dum. Site na bọtịnụ Google, gị na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọdịnaya omenala site na Google na ndị mmekọ anyị. Google na-echekwa ma eziokwu ahụ nwere na ị nwere + 1'd otu ọdịnaya na ozi gbasara ibe ị na-ekiri mgbe ịpịrị + 1. A na-ele 1 gị anya na aha profaịlụ gị na foto na ọrụ Google, dịka ọmụmaatụ na nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ na profaịlụ Google gị, ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ na weebụsaịtị na mgbasa ozi na Intaneti.
Ihe ndekọ ederede Google gbasara ọrụ + 1 gị iji melite ọrụ Google maka gị na ndị ọzọ. Iji jiri bọtịnụ Google, ịkwesịrị ịhụ ụwa, ọha na eze A na - eji aha Google niile eme ihe a. N'ọnọdụ ụfọdụ, aha a nwere ike dochie aha ọzọ ị jiri iji kesaa ọdịnaya site na akaụntụ Google gị. Onye maara adreesị ozi-e gị ma ọ bụ ozi ndị ọzọ nwere ike ịmata gị.
Iji data anakọtara: Na mgbakwunye na ojiji ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ozi a nyere dịka agbasoro nchedo data Google dị. Google nwere ike iwepụta nchịkọta nchịkọta banyere ndị ọrụ '+ ọrụ 1 ma ọ bụ soro ndị ọrụ yana ndị mmekọ, dị ka ndị nkwusa, ndị mgbasa ozi, ma ọ bụ ndị mmekọ mmekọ.
Ụlọ ọrụ anyị nwere ọrụ nke ọrụ Instagram. Ọrụ ndị a bụ site Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Ọ bụrụ na ịbanye na akaụntụ Instagram gị, ị nwere ike pịa bọtịnụ Instagram iji jikọta ọdịnaya nke ibe anyị na profaịlụ gị Instagram. Nke a pụtara na Instagram nwere ike iji nlekọta akaụntụ gị na-eleta ibe anyị. Dị ka onye na-eweta weebụ a, anyị na-egosipụta n'ụzọ doro anya na anyị anaghị enweta ozi ọ bụla gbasara ọdịnaya ma ọ bụ iji Instagram.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere ọrụ nke netwọk mmekọrịta Pinterest, nke a na-eme site Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, United States.
Mgbe ị gara na ntinye aka mgbakwunye Pinterest, nchọgharị gị na-eweta njikọ kpọmkwem na sava Pinterest. Ihe mgbakwunye ahụ na-enyefe sava ndị log na Pinterest na United States. Ebe a na-edekwa: Pinterest atụmatụ, ụdị ihe nchọgharị na ntọala, ụbọchị na oge nke arịrịọ, otu esi eji Pinterest, na kuki.
Pinterest, nakwa ikike gị na nhọrọ ịchebe nzuzo gị, nwere ike ịchọta na ọkwa nzuzo nzuzo nke Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
6. Nchịkọta na mgbasa ozi
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji Google Analytics, ọrụ nchịkọta weebụ. Ọ bụ Google Inc. na-ejikwa ya, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Nchịkọta Google na-eji ihe a na-akpọ "kuki". Ndị a bụ faịlụ ederede echekwara na kọmputa gị ma na-enye ohere ka ị nyochaa weebụsaịtị. Ntọala Google na United States ma chekwaa ebe ahụ.
A na-echekwa kuki nchịkọta Google site na Art. 6 (1) (f) DSGVO. Onye ọrụ weebụ ahụ nwere mmasị dị mma iji nyochaa omume onye ọrụ iji nweta ma saịtị ya na mgbasa ozi ya.
Ndenye aha IP
Anyị ejirila njirimara aha IP na saịtị weebụ a. Adreesị IP gị ga-eme mkpụmkpụ nke Google n'ime European Union ma ọ bụ ndị ọzọ na Kọmitii na Njikọ Akụ na Europe. Naanị n'ọnọdụ ndị dị oke bụ adreesị IP zuru ezu ezigara na sava Google na US ma dị mkpirikpi. Google chọrọ iji ozi a na nnọchite nke onye ọrụ weebụ iji nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gị. Adreesị IP ahụ site na ihe nchọgharị gị dị ka akụkụ nke Google Analytics agaghị ejikọta ya na ihe ọ bụla Google nwere.
Ị nwere ike igbochi kuki ịchekwa site na ịhọrọ ntọala kwesịrị ekwesị na ihe nchọgharị gị. Otú ọ dị, anyị achọghị ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ ọrụ niile nke weebụsaịtị a. Ị nwekwara ike ịgụ ihe ndị na-esonụ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ihe gbasara nchịkọta data
Ị nwere ike igbochi nchịkọta data gị site Google Analytics site na ịpị njikọ njikọ na-esonụ. Kuki kuki na-achọ ka data gị ghara ịnakọta na nleta n'ọdịnihu na saịtị a: Gbanyụọ Google Analytics.
Maka ama ndi ozo banyere uzo Google Analytics ji eme ihe ndi ozo, lee iwu nke Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
Nhazi usoro data
Anyị abanyewo na nkwekọrịta na Google maka outsourcing nke nhazi data anyị ma mejuputa ihe siri ike nke ndị ọrụ nchedo data German na-eji Google Analytics.
Ebe a na-eji Google AdSense, ọrụ maka mgbasa ozi gụnyere gụnyere Google Inc. ("Google"). Ọ bụ Google Inc. na-ejikwa ya, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google AdSense na - eji "kuki", nke bụ faịlụ ederede echekwara na kọmputa gị. Google AdSense na-eji mgbama weebụ a na-akpọ (ndị a na-adịghị ahụ anya). Site na mgbama weebụ ndị a, a na-enyocha ọchụchọ ndị a na ibe ndị a.
Ihe ọmụma dị n'ime ebe a na-enye gị site na saịtị a (gụnyere adreesị IP gị) na nnyefe nke usoro mgbasa ozi. A ga-esi na Google gaa ozi ndị a na-emekọrịta ihe na Google. Ma, Google achọghị adreesị IP gị.
A na-echekwa kuki AdSense dabeere na Art. 6 (1) (f) DSGVO. Onye ọrụ weebụ ahụ nwere mmasị dị mma iji nyochaa omume onye ọrụ iji nweta ma saịtị ya na mgbasa ozi ya.
Ị nwere ike igbochi nwụnye kuki site na ịmepụta ihe nchọgharị gị na ya. Biko mara na na nke a, ị nwere ike agaghị enwe ike iji atụmatụ niile nke weebụsaịtị a. Site n'iji weebụsaịtị a, ikwenye na nhazi data metụtara ma dịka Google nakọtara.
Ihe omuma nke jikotara na Google AdWords na DoubleClick. Ọrụ Google a nyere gị, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Nke a na atụmatụ na-eme ka o kwe omume na-ejikọta iche kiriri maka nkwado ahịa kere na Google Analytics Remarketing na cross-ngwaọrụ ike nke Google AdWords na Google DoubleClick. Na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ (dịka mbadamba ma ọ bụ kọmputa).
Ozugbo i nyere nkwenye gị, Google chọrọ isoro gị na Akaụntụ Google maka nzube a. N'ụzọ ahụ, ịnwere ike iji otu ozi mgbasa ozi ahaziri.
Iji kwado atụmatụ a, Nchịkọta Google nakọtara ID nke ndị ọrụ Google nyocha na-ejikọta ugbu a na data Google Analytics iji kọwaa ma mepụta ndị mmadụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ị nwere ike ịpụ apụ kpamkpam site na nkwurịta okwu na-agafe agafe / ezubere iche site na igbanyụọ mgbasa ozi ahaziri iche n'ime akaụntụ Google gị; soro njikọ a: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
The aggregation nke data anakọtara gị Google akaụntụ data dabeere nanị na nkwenye gị, nke ị nwere ike inye ma ọ bụ ịdọrọ si Google site Art. 6 (1) (a) DSGVO. N'ihi data collection arụmọrụ bụghị merged n'ime gị Google akaụntụ (ihe atụ, n'ihi Ị nwere a Google Account ma ọ bụ ekwenyeghị jikọrọ ọnụ), na collection of data dabeere Art. 6 (1) (f) DSGVO. Onye ọrụ weebụsaịtị ahụ nwere mmasị dị mma iji nyochaa njirimara onye ọrụ aha akwadoghị maka nkwado.
Maka ozi ndị ọzọ na Nzuzo Google, gaa na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji Google AdWords. AdWords bụ usoro mgbasa ozi n'ịntanetị site na Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").
Dịka akụkụ nke Google AdWords, anyị na-eji ihe a na-akpọ nsụgharị ntọghata. Mgbe ị pịrị na mgbasa ozi nke Google na-arụ, a na-edozi kuki nchigharị ntụgharị. Kuki bụ obere faịlụ ederede na ịntanetị na-echekwa na kọmputa gị. Kuki ndị a kubie ume mgbe ụbọchị 30 na-ejighị ya maka njirimara onwe onye nke onye ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ gara na ebe nrụọrụ weebụ na kuki ahụ anaghị agwụ, Google na ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịgụ na onye ọrụ ahụ pịrị na mgbasa ozi wee gaa na ibe ahụ.
Onye mgbasa ozi Google AdWords nwere kuki dị iche. N'ihi ya, a pụghị ịdebe kuki site na iji weebụsaịtị nke AdWords mgbasa ozi. A na-eji ozi eji enweta kuki a na-agbanwe agbanwe iji mee ka ọnụego ndị a tọghatara. A na-agwa ndị ahịa ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-etinyere mgbasa ozi ha ma weghaara ha gaa na Otú ọ dị, ndị mgbasa ozi agaghị enweta ozi ọ bụla. Ọ bụrụ na ịnweghị ike isonye na nsuso, ị nwere ike ịpụpụ na nke a site na ịme ka kuki kuki nke Google na-agbanwe agbanwe gị. N'ime ime nke ahụ, ị ​​gaghị etinye aka na nchịkọta nchịkọta akụkọ ntọghata.
A na-echekwa kuki ntughari na Art. 6 (1) (f) DSGVO. Onye ọrụ weebụ ahụ nwere mmasị dị mma iji nyochaa omume onye ọrụ iji nweta ma saịtị ya na mgbasa ozi ya.
Anyị na-eji "Google reCAPTCHA" (mgbe "reCAPTCHA") na weebụsaịtị anyị. Ọrụ Google a nyere gị, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
reCAPTCHA bụ data banyere na websaịtị anyị (nakwa na ụdị kọntaktị). Iji mee nke a, reCAPTCHA na ebe nrụọrụ weebụ dabere na njirimara dị iche iche. Ntụle a na-amalite na-akpaghị aka ozugbo onye ọbịa weebụ abanye na weebụsaịtị. Maka nyochaa, reCAPTCHA na-enyocha ozi dị iche iche (dịka adreesị IP, ogologo oge onye ọbịa ahụ mere na ebe nrụọrụ weebụ, ma ọ bụ mmegharị mkpọtụ nke onye ọrụ). Ihe data achọtara na nyocha ahụ chọrọ ka e zigara ya na Google.
Ntụle reCAPTCHA na-ewere ọnọdụ kpam kpam na ndabere. A gwaghị ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ na nyocha na-ewere ọnọdụ.
Nhazi data sitere na Art. 6 (1) (f) DSGVO. Onye ọrụ weebụ ahụ nwere mmasị dị mma maka ichebe saịtị ya site na ijiji ma ọ bụ spam arụmọrụ.
Ndị a na-ekwe ka omume nke ndị nleta saịtị ga-esoro na mgbasa ozi Facebook iji ruo ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-ahụ maka ọrụ. Nke a na-enye ohere nyochaa ịdị irè nke mgbasa ozi Facebook maka ihe ndekọ nchịkọta akụkọ na nyocha ahịa na njikarịcha ha n'ọdịnihu.
Ihe data anakọtara bu onye oru nke weebụsaịtị a ma anyi agaghi enwe ike iji ya weputa ihe obula banyere njirimara ndi oru anyi. Otú ọ dị, Facebook na-echekwa ma dezie data ahụ, nke nwere ike ịme njikọ na profaịlụ Facebook gị na nke nwere ike iji data maka atụmatụ mgbasa ozi nke ya, dị ka ekwuru na ya. Iwu nzuzo Facebook, Nke a ga-ekwe ma na Facebook ma na saịtị ndị ọzọ. Anyị enweghị njikwa banyere otu esi eji data a.
Lelee iwu nzuzo nke Facebook iji mụtakwuo maka ichedo nzuzo gị: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Ị nwere ike kwụsị ọrụ ndị a na-anụkarị na Mgbasa ozi Ntọala na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen, Ị chọrọ ịbanye n'ime Facebook.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Facebook, ị nwere ike ịpụ na mgbasa ozi sitere na Facebook sitere na Facebook na weebụsaịtị nke European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ozi ala anyị, anyị chọrọ ka adreesị ozi-e dị oke yana ozi nke na - enye gị ohere ịchọpụta na ị bụ onye nwe akwụkwọ a. Enweghi ihe ndi ozo achoputara ma obu achota na onu ala. Anyị na-eji data a eziga gị ozi a rịọrọ.
Ya mere, anyị chọrọ, hazie data ọ bụla ị banyere na mpempe akwụkwọ naanị site n'ikike gị. 6 (1) (a) GDPR. Ị nwere ike iwepu nkwenye na nchekwa nke data gị yana adreesị ozi-e yana ha eji maka izipu ozi ala n'oge ọ bụla, dịka site na njikọ "wepu aha" na akwụkwọ akụkọ ahụ. A na-edozi data ahụ tupu anyị anata arịrịọ gị.
A ga-ebipụta data ahụ mgbe ị denyere aha maka akwụkwọ akụkọ ahụ. Data anyị echekwara maka ebumnuche ndị ọzọ (dịka adreesị ozi-e maka mpaghara ndị òtù) anọgideghị na-emetụta.
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji ọrụ MailChimp ziga ozi akwụkwọ ozi. Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp bụ ọrụ nke na-ahazi na nyochaa nkesa akwụkwọ akụkọ. Ọ bụrụ na ịnye data (dịka adreesị email gị) iji denye aha na akwụkwọ akụkọ anyị, a ga-echekwa ya na sava MailChimp na USA.
Anyị na-eji MailChimp iji nyochaa ozi mgbasa ozi anyị. Mgbe ị mepee email zitere MailChimp, faịlụ nke gụnyere na email na-ejikọ na sava MailChimp na United States. Nke a na-enye anyị ohere ikpebi ma ọ bụrụ na e mepeela ozi mgbasa ozi na nke njikọ ị pịa. Na mgbakwunye, a na-anakọta ozi gbasara ọrụ (adreesị IP, ụdị ihe nchọgharị, na sistemụ arụmọrụ). A gaghị enyefe ozi a na otu onye nnata. A na-eji ya eme ihe nanị maka nyocha akụkọ banyere nchịkọta akụkọ anyị. Ihe nchoputa ndi a nwere ike iji mee ka ndi mmadu mara akwukwo ozi ozo.
MailChimp, ịchọrọ ịdenye aha na ala. Maka nke a, anyị na-enye njikọ na ozi ọ bụla anyị zitere. Ị nwere ike wepu aha gị site na akwụkwọ akụkọ ahụ na weebụsaịtị.
Nhazi data sitere na Art. 6 (1) (a) DSGVO. Ị nwere ike iwepu nkwenye gị n'oge ọ bụla site n'ịgaghị edebanye aha na ala. A na-edozi data ahụ tupu anyị anata arịrịọ gị.
Mgbe ị na-ekwu na a na-eme ya na listi nzipu ozi, a ga-ajụ gị ka ị kagbuo ndenye aha gị. Data anyị echekwara maka ebumnuche ndị ọzọ (dịka adreesị ozi-e maka mpaghara ndị òtù) na-anọgide na-enweghị ntụpọ.
Maka nkọwa, lee iwu nzuzo MailChimp na https://mailchimp.com/legal/terms/.
MailChimp, nke anyị chọrọ MailChimp iji kpuchie data nke ndị ahịa anyị ma ghara igosipụta data ahụ nye ndị ọzọ. Nkwekọrịta a nwere ike ile anya na njikọ na-esonụ: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.
Ebe nrụọrụ anyị na-eji plugins si YouTube, nke Google na-arụ ọrụ. Onye ọrụ nke ibe bụ YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Ọ bụrụ na ị gaa n'otu n'ime ibe anyị ndị nwere ngwa YouTube, njikọta na sava YouTube dị. N'ebe a, a na-agwa ihe nkesa YouTube banyere nke ibe anyị ị gara.
Ọ bụrụ na ịbanye na akaụntụ YouTube gị, YouTube na-enye gị ohere ịmekọrịta omume nchọgharị gị ozugbo na profaịlụ onwe gị. Ị nwere ike igbochi nke a site na ịbanye na akaụntụ YouTube gị.
A na-eji YouTube mee ka ebe nrụọrụ weebụ anyị na-adọrọ mmasị. Nke a bu ihe bara uru n'onodu Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Enwere ike ịchọta ozi gbasara njikwa data njirimara na nchedo data nchedo YouTube n'okpuru https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Ụlọ ọrụ anyị na-eji atụmatụ ndị Vimeo vidiyo vidiyo na-enye. Ọrụ a bụ Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Ọ bụrụ na ị gaa n'otu n'ime ibe anyị ndị na-egosi ihe mgbakwunye Vimeo, a ga - eguzobe njikọ na Vimeo sava. N'ebe a, a na-agwa ihe nkesa Vimeo banyere ibe ndị ị gara. Na mgbakwunye, Vimeo chọrọ inweta adreesị IP gị. Nke a na-emetụta ma ọ bụrụ na ịbanyeghị na Vimeo mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ anyị ma ọ bụ nwee akaụntụ Vimeo. A na-ebute ozi ahụ na sava Vimeo na US, ebe ọ na-echekwa ya.
Ọ bụrụ na ịbanye na akaụntụ Vimeo gị, Vimeo na-enye gị ohere ịmekọrịta omume nchọgharị gị ozugbo na profaịlụ onwe gị. Ị nwere ike igbochi nke a site na ịbanye na akaụntụ Vimeo gị.
Maka ama ndi ozo gbasara otu esi ejikwa data ndi ozo, biko gaa na Nzuzo Vimeo na https://vimeo.com/privacy.
Maka akara nnochi nke ederede, ibe a jiri akara weebụ nke Google nyere. Mgbe ị mepee peeji nke, ihe nchọgharị gị na-eburu fon dị ichiiche a chọrọ n'ime oghere ihe nchọgharị gị iji gosipụta ederede na mkpụrụokwu n'ụzọ ziri ezi.
A haziri nchọgharị a iji jikọọ na sava Google. Google si otú a mara na e webatara ibe weebụ anyị site na adreesị IP gị. A na-eji mkpokọta Gọọmenti Google rụọ ọrụ mara mma ma dị mma nke weebụsaịtị anyị. 6 (1) (f) GDPR.
Ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị anaghị akwado ụda weebụ, a na-eji kọmputa gị arụ ọrụ ọkọlọtọ ọkọlọtọ.
Enwere ike ịchọta ozi gbasara njikwa data njirimara https://developers.google.com/fonts/faq na iwu nzuzo nke Google na https://www.google.com/policies/privacy/.
Ebe a na-eji ọrụ map Google Map site na API. Ọ bụ Google Inc. na-ejikwa ya, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Iji jiri Google Maps, ọ dị mkpa ịchekwa adreesị IP gị. A na-asụgharịrịrị ozi a na netwọk Google na United States ma chekwaa ebe ahụ. Onye na-enye saịtị a enweghị mmetụta na ntinye data a.
A na-eji Google Maps mee ihe maka mmasị ịmepụta weebụsaịtị anyị. 6 (1) (f) GDPR.
Enwere ike ịchọta ozi gbasara njikwa data njirimara, na nchedo data nke Google na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
9. Ntanetị ahịa na ahịa na mmekọ
Mmemme Mgbakwunye Amazon
Ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ na-ekere òkè na usoro mmemme nke Amazon. Akwụkwọ anyị nwere mgbasa ozi na njikọ na saịtị na-ejikwa amazon.com site na nke anyị nwere ike irite ụgwọ ntinye aka. Amazon ji kuki iji chọpụta ebe iwu ahụ si malite. N'ihi ya, Amazon nwere ike ịchọpụta na ịpịrị njikọ njikọta na weebụsaịtị anyị.
Nchekwa nke kuki Amazon dị na Art. 6 (f) DSGVO. Onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere ezigbo mmasị na ọrụ a ebe ọ na-enweta ụgwọ maka ụgwọ maka ntinye akwụkwọ.
Iji nwetakwuo ozi gbasara otu Amazon si eji data gị, hụ Nzuzo Ama Amazon https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
10. Ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na-anabata ịkwụ ụgwọ site na PayPal. Onye na-enye ọrụ a bụ PayPal (Europe) S.à.rl & Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
6 (1) (a) (Consent) na Art. 6 (1) (b) DSGVO (Nhazi maka nkwekọrịta nkwekọrịta). Ị nwere nhọrọ iji wepụ nkwenye gị n'oge ọ bụla na mmetụta n'ọdịnihu. Ọ naghị emetụta nhazi data achọtara n'oge gara aga.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na-anabata ịkwụ ụgwọ site n'aka Sofortüberweisung. Onye na-enye ọrụ a bụ Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich, Germany.
Sofortüberweisung na-enye anyị ezigbo ụgwọ ịkwụ ụgwọ, na-ekwe ka anyị malite imezu nkwekọrịta anyị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụ ụgwọ iji Sofortüberweisung, ịchọrọ ị nweta PIN na TAN dị mma na Sofort GmbH ka ọ nwee ike ịnweta akaụntụ ịdenye ego n'ịntanetị. Sofort GmbH chọrọ ka ịlele akaụntụ gị na-akpaghị aka ma mee ka anyị nyefee na akaụntụ anyị site na iji TAN ị na-enye. Ọ na-eziga nkwenye azụmahịa ozugbo. Mgbe ịbanye, ego gị, nchebe n'elu, na nnweta ndị ọzọ na-echekwa ga-enyocha.
Na mgbakwunye na PIN na TAN, a ga-eziga nkọwa nkwụnye ụgwọ ị nyere yana ozi gbasara gị na Sofort GmbH. Ozi nkeonwe a gụnyere aha gị, adreesị, nọmba ekwentị, adreesị ozi-e, adreesị IP, yana data ọ bụla achọrọ iji hazie ụgwọ gị. Data a ga-enwe nchedo na nchekwa.
Biko jiri aka Sofortüberweisung na-ekwu banyere ịkwụ ụgwọ ahụ n'okpuru: https://www.sofort.de/datenschutz.html na https://www.klarna.com/sofort/.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na-anabata ịkwụ ụgwọ site Paydirekt. Onye na-enye ọrụ a bụ Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt, Germany (nke a na-akpọ "Paydirekt").
Ugbu a, Paydirekt na-anakọta data dị iche iche nke azụmahịa na nke ị ga-akwụ ụgwọ. Na mgbakwunye na data achọrọ maka ịkwụ ụgwọ ahụ, Paydirekt chọrọ ịnakọta ihe niile dị na ahịa ịzụ ahịa gị.
Paydirekt wee gosipụta azụmahịa ahụ site na iji usoro nyocha nke ụlọ akụ gị guzobere. Anyị ma ọ bụ ndị ọzọ anaghị enweta ozi akaụntụ gị.
Maka ama ndị ọzọ, lee usoro na ọnọdụ na iwu nzuzo nke Paydirekt na https://www.paydirekt.de/agb/index.html.
Rating: 5.0/ 5. Site na votu 1.